धनी बन्न मन छ ? विज्ञहरुका ५ सुझाव - Saptakoshionline
धनी बन्न मन छ ? विज्ञहरुका ५ सुझाव
प्रकाशित मिति: बिहिबार, भाद्र १४, २०७५ समय: ५:४३:५५
यो संसारमा धनी बन्न कसलाई पो मन नहोला र ?
धेरै मानिसलाई लाग्न सक्छ कि धनी बन्नु भनेको भाग्यको खेल हो । के साँच्चै भाग्य नै हो त धनी बनाउने ?
धनी बन्नु भाग्य मात्रै नभएर रणनीतिक लगानीले मानिसलाई धनी बनाउने तर्क केही विज्ञहरूले पेश गरेका छन् । उनीहरू धनलाई उसको म्यानेजमेन्ट र करियरसँग सम्बन्धित रहेको मान्छन् । धनी बन्ने वा नबन्ने भन्ने निर्णय आफ्नै हातमा हुन्छ । उनीहरु भन्छन्– सोच, दृष्टिकोण र बानी अनुसार तपार्इं धनी बन्ने या नबन्ने छुट्टिन सक्छ ।
आर्थिक पत्रिकाको एक रिपोर्टका अनुसार जिन्दगीमा सँधै मानिसलाई धनी बन्ने मौका र संकेत मिलेको हुन्छ । यसलाई समात्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने कुरा तपाईं हामीमा भर पर्छ ।
कम उमेरमा हुने कमाइको मौका
रिर्पाेट भन्छ– यदि तपाईंलाई धनी बन्ने चाहना छ भने सानो उमेरमा नै हुने कमाइको मौका छोड्नु हुँदैन । सानो उमेरमा भएको कमाइमा पछि धेरै कमाइ गर्ने संम्भावना हुन्छ । यदि सानो उमेरमा गरिएको कमाई कुनै फाइनन्सियल मार्केटमा लगानी गर्ने हो भने बुढेसकाल लाग्दा त्यसले धेरै फाइदा दिन सक्छ । विश्वमा यस्ता धेरै उदाहरण भेटिन्छन्, जसले सानो उमेरमा नै पढाई छोडेर कमाइमा लागेका र पछि उनै व्यक्ति संसारकै धनी मानिसको सूचिमा पनि परेका छन् । बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग र वारेन बफेट यसका उदाहरण हुन् ।
कुनै नयाँ व्यवसायमा हात हाल्ने मौका
बिबिसी क्यापिटलको एक रिपोर्टका अनुसार नयाँ खालको व्यवसायले सँधै मानिसलाई धनी बनाउन सक्छ । किनभने यस्तो व्यवसाय बढ्ने सम्भावना २ हजार प्रतिशत भन्दापनि बढी हुन्छ । तर, यस्तो व्यवसाय डुब्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन सक्छ । तर, जोखिम मोलेर धनी बन्ने सम्भावनाबाट पर भाग्नु पक्कैपनि बुद्धिमानी हुन सक्दैन ।
रातारात धनी बन्नु कहिलेकाहीँ सपनामा देखिने परीको कथा जस्तो पनि लाग्छ । तर, नयाँ सृजनाले रातारात धनी बन्ने सपना जीवित राखेको हुन्छ । अमेरिकासँगै विश्वभरिका मानिस यस्तै कुनै नयाँ सृजनाले रातारात धनी भएका भेटिन्छन् । फेसबुक, गुगल, एप्पल लगायत भारतमा पेटिएम, फ्लिपकार्ड जस्ता कम्पनी सानो लगानी र सानो ठाउँमा सुरु गरेका थिए । नयाँ सृजनाले चलेका यस्ता कम्पनीका संस्थापक केही वर्षमा धनी भएका हुन् । कुनैपनि कम्पनी नयाँ सोचबाट सुरु भयो भने त्यसले छिटो सफलता दिलाउँछ पनि ।
भविष्य हेरेर वर्तमानमा गरिने लगानी
बिबिसी क्यापिटलका अनुसार धनी झन्झन् धनी बन्दै गइरहेका छन् । त्यो देख्दा धनीलाई मात्रै धनी बन्ने अधिकार छकि जस्तो देखिन्छ । तर, धनी यसकारण झन् धनी भएका छन् कि, उनीहरु भविष्य हेरेर विशेष क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्छन् । उनीहरू यस्तो व्यवसायमा लगानी गर्छन् ताकि, भविष्यमा उक्त व्यवसायको राम्रो सम्भावना होस् ।
रिपोर्टका अनुसार यस्तो व्यवसाय सुरुमा निकै कम पूँजीबाट सुरु गरिएको हुन्छ । तर समयसँगै यसको आकार र नाफा पनि बढ्दै जान्छ ।
कुनै विशेष सम्पतिमा लगानी
इन्टरप्रेनियर रिपोर्टका अनुसार कुनै विशेष वस्तुमा गरेको लगानीले मानिसलाई धनी बनाउन सक्छ । विशेष वस्तु भन्नाले जुन वस्तुको मूल्य वर्तमानमा निकै सस्तो पर्न सक्छ । तर, भविष्यमा महङ्गो ।
यस्ता वस्तुमा लगानी गर्दा कमाइ हुन केही समय त लाग्छ । तर, नसोचेको मूल्यमा नाफा हुन सक्छ । यस्तो लगानीमा अपरेशनल खर्चमा धेरै पैसा लगानी पनि गर्नु पर्दैन । यस्तो कारोबारमा न कुनै अफिस चाहिन्छ न कुनै शोरुम नै ।
नेपालमा राजा फर्कने सम्भावना प्रवल बन्दै
विकास भण्डारी, इटहरी, सुनसरी नेपालको एकिकरण भएको समय देखि वि.सं. २०६५ साल जेष्ठ १५ गतेका दिन सम्म राजा नेपालमा नेपाली जन...
बन्धन सिमेन्टद्वारा ५ लाखको दुर्घटना विमा
बन्धन सिमेन्ट उत्पादक नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट प्रा.लि.ले विराटनगरमा बन्धन मेसन मीट २०७७ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । नि...
किन उठ्छ रिस ? कसरी नियन्त्रण गर्ने अनावस्यक उठेको रिस ?
रिस क्रोध अथवा आवेगकै कारण अहिले गायिका आस्था रावत विवादमा छिन् । विमानस्थलमा महिला प्रहरीले चेकजाँच गर्न खोज्दा उत्त्पन...
राजनितिक अस्थिरताको शिकारमा नागरिकता पिडित
हाम्रो देश यतिबेला गम्भिर राजनितिक संकटको अवस्थामा छ । राजनितिक स्थिरता र दिगो विकास नारामा मात्र सिमित रहेको हामी नेपाल...
नवगायक कविराज खड्काको पहिलो गित सार्वजनिक
इटहरी, भनिन्छ गित भन्ने बित्तिकै एकदमै सरल हुनुपर्छ,ताकी जोसुकैले सहजै बुझ्न सुन्न र हेर्न सक्ने,गितमा त्यती धेरै गहिरो ...
एकसाथ ७ प्रेमिकालाई गर्भवती बनाए यी युवकले
उनी स्टन्टका राजा भन्ने उपनामले पनि परिचित छन् । उनी जहाँ जान्छन् विवाद उनीसँगै उब्जिन्छ । नाइजेरियाका प्रिटी माइक नामक ...